Vatican na Riyadh bịanyere aka na nkwekọrịta iji wuo ụka na Saudi Arabia, jide nzukọ ndị Alakụba na Ndị Kraịst
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Vatican na Riyadh bịanyere aka na nkwekọrịta iji wuo ụka na Saudi Arabia, jide nzukọ ndị Alakụba na Ndị Kraịst
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ kacha ọhụrụ na Vatican
Saudi Arabia agakwaghị abụ naanị steeti Gulf na-enweghị ebe ofufe ndị Kristian ọha, mgbe e binyechara nkwekọrịta n'etiti ndị isi obodo Wahhabi na Kadịnal Vatican iji guzobe mmekọrịta na-emekọrịta ihe.
"Nke a bụ mbido nke ịbịaru nso a Ọ bụ ihe ama na-egosi na ndị ọchịchị Saudi adịla njikere ugbu a inye obodo ahụ onyonyo ọhụụ," otu n'ime ndị isi Katọlik kachasị, Onye isi Pontifical Council for Inter-religious Dialogue Kadinal Jean -Louis Tauran, gwara weebụsaịtị Vatican News mgbe ọ laghachiri na Riyad.
Tauran nọ na Saudi Arabia maka otu izu na etiti ọnwa gara aga, na nleta nke ndị mgbasa ozi mpaghara na-agbasa, ma ndị na-asụ Bekee na-elegharakarị ya anya. O zutere onye de-facto onye ọchịchị Crown Prince Mohammed bin Salman na ọtụtụ ndị isi mmụọ.
Nkwekọrịta ikpeazụ bịanyere aka n'etiti Tauran na Sheikh Mohammed bin Abdel Karim Al-Issa, Secretary General nke Muslim World League, na-emeghe ụzọ ọ bụghị naanị maka iwu ụlọ, mana akọwapụtala atụmatụ maka nzukọ ndị Alakụba-Ndị Kraịst otu ugboro kwa afọ abụọ na maka ikike ka ukwuu. maka ndị na-abụghị ndị Alakụba na-efe ofufe na alaeze Ọwara.
Ka ọ dị ugbu a, a na-ata ndị na-abụghị ndị Alakụba nọ na Saudi Arabia ahụhụ maka ngosipụta ọ bụla nke okpukperechi ha na mpụga ụlọ ha, ebe onye Alakụba ọ bụla nke kpebiri ịgbanwe okpukpe ọzọ nwere ikpe ọnwụ maka ndapụ n'ezi ofufe. A na-etinye iwu okpukpe okpukpe nke otu onye niile bi na steeti mmanụ bara ụba, n'agbanyeghị nkwenkwe, ebe ndị uwe ojii raara onwe ha nye na-ahụ maka nnabata.
Ka o sina dị, enweela mmụba nke ndị ọrụ na-akwaga na alaeze n'ime iri afọ ndị gara aga, a na-echekwa na Ndị Kraịst karịrị nde 1.5 nọ na mba ahụ, ọkachasị na Philippines.
Ngbalị iji kwalite ọnọdụ a na-ahụ anya maka Iso Christianityzọ Kraịst site na ụbọchị Vatican laghachiri na afọ 2008, ọ na-ekwupụtakwa nkwekọrịta nwere ike "ịkọ akụkọ ihe mere eme" iji wuo ụka mbụ nke oge a, atụmatụ nke mechara mechie.
Mana ohere nke opekata mpe ihe ngosi ịchọ mma dị ka ọ ga-abụ na ọchịchị nke onye na-ahụ maka ihe osise bụ Mohammed bin Salman, bụ onye hapụgoro ọtụtụ ọdịnala dị ịrịba ama, dịka ndị na-amachibido ụmụ nwanyị ịkwọ ụgbọala, ma ọ bụ chọọ ka ha nọrọ n'okpuru oge niile nlekọta nke ndị na-elekọta ha nwoke.